Dhis ama Iibso? Xalinta Dhibaatooyinka Ganacsi ee Softwareka Saxda ah | Martech Zone
Dhibaatadaas ganacsiga ama hadafka waxqabadka ee kugu walaacaya waayadan dambe? Fursadaha ayaa ah xalka ay ku xiran tahay tikniyoolajiyadda. Maaddaama dalabyada waqtigaaga, miisaaniyadda iyo xiriirka ganacsi ay sii kordhayaan, fursaddaada keliya ee aad kaga hor mari karto tartamayaasha adigoon maskaxdaada lumin ayaa dhammaatay qalabaynta.
Isbeddelada habdhaqanka iibsadaha ayaa dalbanaya otomaatig
Horey waad u ogtahay in otomatiggu yahay mid aan maskax lahayn marka loo eego waxtarka: khaladaadka yar, kharashyada, dib udhaca, iyo howlaha gacanta. Sida muhiimka ah, waa waxa ay macaamiisha hadda filayaan. Caadaysigeenna wadajirka ah ee dijitaalka ah, oo ay kharribeen sida Facebook, Google, Netflix iyo Amazon, ayaa macnaheedu yahay iibsadayaashu hadda waxay jecelyihiin isla heerka shakhsi ahaaneed, xawaaraha iyo qanacsanaanta degdegga ah, iibiyeyaasha abaalmarinta ah ee bixiya khibradaha noocaas ah, iyo ka tagista iibiyeyaasha aan lahayn.
Beddelaadda habdhaqanku maahan wax si fudud loo qaato: Khibradaha macaamiisha ayaa hadda ku wareejinaya iibsashada go'aannada in ka badan qiimaha, qiimaha, shaqeynta ama astaamaha kale ee astaamaha, ayay leeyihiin cilmi-baarayaasha.
Ganacsiyada, tani waxay u tarjumaysaa xanuun sii kordhaya laakiin sidoo kale fursado aad u baaxad weyn oo looga badin karo tartamayaasha: Ku dhowaad seddex ka mid ah afartii adeeg ee macaamiisha ah ayaa sheegaya in maaraynta culeyskooda shaqo ay tahay caqabadda ugu weyn ee ay qabaan (Ku guuleysta Macaamiisha), iyo ganacsiyadu waxay lumiyaan ku dhowaad $ 11,000 sanadkii, qofkii shaqaale ah, sababtoo ah isgaarsiinta subpar iyo iskaashiga (Mitel).
Layaab ma leh: Shaqaaluhu waxay soo sheegaan in 50% waqtigooda ay kubixinayaan raadinta dukumiintiyada gacanta, celcelis ahaan 18 daqiiqo dukumiinti kasta (M-Faylasha). Tiradaasi waxay kor u kacaysaa 68.6% markaad ku darto isgaarsiinta iyo howlaha wada shaqeynta (Fahanka CIO).
In kasta oo ay fududahay in la arko faa iidooyinka otomaatigga, hirgelintiisu ma aha mid si cad loo jaray. Ma inaad dhisto xalka gaarka ah? Wax ka iibso qolka-shelf-ka? Ma jeceshahay xal horay loo duubay? Kuwaasi waxay noqon karaan kuwo xasilan, go'aanno adag.
Hubinta maalgashigaaga tiknoolajiyada waa mid faa'iido leh
Go'aan la'aanta, kuleylka iyo hawdka ku yimaada xulashada tiknoolajiyada saxda ah ayaa tan ku soo biiraya tan: Xalkee baa waqtigayga iyo doollarkaba iga lumin doonin?
Si fudud u dhig, waxa kala soocaya maalgashiga farsamada ee faa iidada leh iyo kuwa saboolka ahi waa tan: Teknolojiyadda faa iidada leh waxay xallisaa dhibaatooyinka ganacsiga iyo dhibaatooyinka khibrada macaamiisha dhabta ah, ayaa sharraxaysa Barxad Dib-u-Celis ah.
Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah:
Qoraallo xaashiyo dhaadheer
Daahida adeeg bixinta
Hawlo nuqul ah
Waxqabad la'aanta waxqabadka
Shakhsiyeyn la'aan ama ku xirnaan la'aan
Fahamka fikradaha xaqiiqda
Hoops badan oo aad uga boodo hawlo fudud ama jawaabo
Warbixin dhib badan
Maqnaansho, wareer ama xog aan waxtar lahayn, iyo inbadan.
Ka waran waqtiyadaas markii qalab tiknoolajiyadeed dib loo dhaliyo? Halkaas ayaad joogtay: Ciladaha, cillad darrida ama dhibaatooyinka lama filaanka ah waxay shaqaalaha u horseedaan inay mudaaharaadaan, aaladda ka tagaan, kuna laabtaan qaabkii hore ee wax lagu qaban jiray. Sidee uga ilaalisaa inay taasi dhacdo?
Waxay kuu soo baxday inaad saadaalin karto teknolojiyadda ku dambayn doonta aan la adeegsan ama loo arko culays laba tilmaamood oo fashilaad:
Ururku waqti kuma qaadanin inuu fahmo dhibaatada tiknoolajiyadda loogu talagalay in lagu xalliyo iyo dhibaatooyinka ka dhasha dhibaatadaas.
Shaqaaluhu ma fahmin sida adeegsiga xalka ay ugu fududaanayso shaqadooda ama nolosha macaamiisha.
Sax kormeerayaashaas oo waad badisay fursadahaaga guusha.
3 Xulasho + 3 Talaabo
Markaad tixgelinayso dhibaatooyinka aad iskudayeyso inaad xalliso, waxaad leedahay saddex xulasho:
Samee barnaamij gaar ah (ama u habee xalka jira)
Soo iibso xal ka baxsan sheyga
Waxba ha sameyn
Seddex talaabo waa inay hogaamiyaan go'aankaaga:
Qiimee dhibaatooyinka aad rabto in softwareku xaliyo
Qiimee hababka jira
Fahmaan saameynta dhaqaale iyo kheyraad
Ikhtiyaarkee ayaa ugu fiican xaaladaada?
Bob Baird, aasaasihii Barxad Dib-u-Celis ah, shirkad horumarineed oo ku takhasustay softiweerka Indianapolis, ayaa jabinaysa casharradii uu ka bartay ka caawinta ururada inay tilmaamaan xalka ugu wanaagsan ee barnaamijyadooda:
Sababaha loo Dhisayo
Shaqaalahaaga ayaa waqti fiican ku bixiya waqtigooda iyagoo gacanta ku galaya xogta.
Meheraddaadu waxay leedahay baahiyo gaar ah.
Waxaad leedahay laba ama in ka badan oo nidaamyo ah oo ku habboon baahiyahaaga, laakiin waxaad jeclaan lahayd inaad isku xirto.
Software-ka gaarka ah ayaa ku siin doona faa'iido tartan ah.
Uma baahnid inaad dib u habeyn ku sameyso howlaha si aad ula mid noqoto awoodaha barnaamijyada.
Baahidaadu waa mid caadi ah oo xalal ayaa durba la heli karaa.
Waxaad diyaar u tahay inaad dib u habeyn ku sameyso howlaha ganacsiga si aad ula mid noqoto awooda barnaamijyada.
Miisaaniyaddaada bil kasta waxay ka yartahay $ 1,500 barnaamijyada.
Waxaad u baahan tahay inaad si dhakhso leh u hirgeliso barnaamij cusub.
Sababaha Waxba Loogu Qaban Karin
Shaqaaluhu hadda waxay ku qaataan ugu yaraan ama waqti aan ku qaadanaynin buug-gacmeedka ama nuqullada.
Kama qorshaynaysid kobcinta meheraddaada sannadaha soo socda.
Khaladaadka, dib u dhaca, isgaarsiinta khaldan ama warqadaha tayada leh kama jiraan meheradaada.
Nidaamyada hadda socda, soo-celinta iyo kharashyada hawlgalka ayaa loogu talagalay meheraddaada hadda iyo mustaqbalka.
Ku tiirsaneyd Macaamil?
Bob wuxuu qorayaa tixgelinno dhowr ah oo loogu talagalay horumarinta softiweerka gaarka ah:
Ha ku bilaabin liistada muuqaalka. Xoogga saar inaad fahanto dhibaatooyinka aad rabto inaad marka hore xalliso. Si ka duwan dhibcaha rasaasta ee gadaasha baakadaha software-ka, fikraddaada bilowga ah ee naqshadeynta saxda ah ayaa laga yaabaa inay cilladaysan tahay.
Qalabaynta ma aha inay ahaato wax-ama-waxba. Haddii aad jeceshahay dhinacyada xalka jira laakiin aad u baahan tahay inaad jaangooyo ka dhigto qaybo ka mid ah, ogow in barnaamijyo badan oo horay loo soo baakadeeyay lagu waafajin karo API-yada.
Dhisidda softiweerka wuxuu u baahan yahay kharash horudhac ah. Khasab maahan qiime sare; Kaliya waxaad ka bixin doontaa lacagta hore si aad u lahaato halkii aad ruqsad u siin lahayd.
Software-ka gaarka ahi wuxuu u baahan yahay qorshe hore. Wax cusub halkan ma ahan, laakiin waxaa mudan in la xasuusto qorshihii hore inuu garaacayo dhibkii ka dhashay dhib markii software-ka uusan u fulin sidii la filaayay shaqaaluhuna ay ku caasiyoobayaan.
Kireysasho ama Kordhisid Barnaamijkaaga Horumarinta?
Warshadaha horumarinta softiweerku waa kuwa takhasus sare leh, isku soo wada duubida barnaamij websaydh ganacsi u diyaarsan sida caadiga ah waxay ubaahantahay sadex nooc oo xirfado kaladuwan ah. Tixgelintaada ugu horreysa (iyo sida ugu weyn), markaa, waa lacag: Ma awoodi kartaa inaad kireysato dhammaan takhasusayaashan?
Aragtida dheeriga ah, tixgeli in celceliska mushaarka ee soosaaraha .NET, oo ay kujirto faa'iidooyinka, uu yahay $ 80,000 / sanadkii, waxaadna ubaahantahay labo takhasus dheeraad ah si aad kooxdaada uqeexiso. Taas bedelkeeda, u-bixinta mashruucaaga shirkad si buuxda u shaqeysa oo ka shaqeysa horumarinta barnaamijyada waxay kugu kacaysaa qiyaastii $ 120 / saac, saamiyada Bob.
Mawduuca ugu muhiimsan waa tan, xulashadaada inaad dhisato ama iibsato ma ka dhigi doontaa meheraddaadu mid gaar ah oo macaamiisha aad u jecel, mise waxay kugu qasbeysaa inaad beddesho meheraddaada si aad ugu habboonaato barnaamij software ah?
Bob Baird, aasaasihii Barxad Dib-u-Celis ah
Tags: bob bairddhis ama iibsolaba jibbaaranhorumarinta software